San Roberto Bellarmino, Santo del giorno per il 17 settembre | Ilblogdellapreghiera
San Roberto Bellarmino, Senti nke ụbọchị 17 Septemba
(4 Ọktoba 1542 - 17 Septemba 1621)
Akụkọ banyere San Roberto Bellarmino
Mgbe a họpụtara Robert Bellarmine ịbụ onye ụkọchukwu na 1570, ọmụmụ nke akụkọ ntolite nke ụka na ndị Nna Chọọchị nọ n’ọnọdụ jọgburu onwe ya nke nleghara anya. Ebe ọ bụ nwata akwụkwọ nwere olile anya na ntorobịa ya na Tuscany, o tinyere ike ya n'isiokwu abụọ a, yana Akwụkwọ Nsọ, iji wee hazie nkuzi nke Churchka megide mwakpo nke ndị mgbanwe Protestant. Ọ bụ ya bụ onye Jesuit nke izizi ghọrọ prọfesọ na Leuven.
Ọrụ ya kachasị ewu ewu bụ esemokwu mpịakọta atọ na esemokwu nke okwukwe Ndị Kraịst. Akpan akpan n̄wọrọnda edi ikpehe oro aban̄ade odudu odudu oro pope enyenede ye udeme mbon oro ẹdude ke ufọkabasi. Bellarmine kpalitere iwe nke ndị ọchịchị alaeze England na France site n'igosi echiche nke ikike Chineke nke ndị eze a na-apụghị ịgbagha agbagha. Ọ rụpụtara echiche nke ike ọchịchị pope na ihe ndị a na-ahụ anya oge; ọ bụ ezie na ọ gbachitere popu megide onye Scotland bụ ọkà ihe ọmụma Barclay, ọ kpasuru iwe nke Pope Sixtus V.
A họpụtara Bellarmine ịbụ Kadịnal site n'aka Pope Clement VIII na "ọ nweghị nha anya na mmụta". Mgbe ọ na-ebi ụlọ na Vatican, Bellarmino atọpụghị ọfụma ọ bụla gara aga. Ọ na-ejedebe nanị n'ihe ndị na-adị mkpa n'ụlọ ya nanị n'ihe ndị dị oké mkpa, na-eri nanị nri ndị ogbenye nwere. A maara ya maka ịnapụta onye agha hapụrụ agha ma jiri ákwà mgbochi na ime ụlọ ya chọọ ndị ogbenye mma, na-ele anya: "Mgbidi ahụ anaghị atụ oyi."
N’etiti ọtụtụ ihe omume, Bellarmino ghọrọ onye ọkà mmụta okpukpe nke Pope Clement VIII, na-akwadebe katkizim abụọ nwere nnukwu mmetụta na Chọọchị.
Nnukwu esemokwu ikpeazụ banyere ndụ Bellarmine malitere na 1616 mgbe ọ dụrụ enyi ya Galileo ọdụ, onye ọ masịrị. O nyere ịdọ aka na ntị a n'aha Officelọ Nsọ Dị Nsọ, nke kpebiri na echiche Copernicus na heliocentric megidere Akwụkwọ Nsọ. Dọ aka na ntị ahụ bụ otu ịdọ aka na ntị ka ị ghara ị gaa n'ihu - belụsọ dị ka nkwupụta-echiche echebeghị nke ọma. Nke a gosiputara na ndi nso adighi agha agha.
Robert Bellarmine nwụrụ na Septemba 17, 1621. Usoro maka ibido ya na 1627, mana egbu oge ruo 1930 maka ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị, sitere na ihe odide ya. Na 1930 Popu Pius nke Iri na anọ chiri ya akwụkwọ ma n'afọ na-eso ya kwupụtara na ọ bụ dọkịta nke Churchka.
Imeghari ohuru na Churchka nke Vatican nke abuo siriiri otutu ndi Katoliki ike. N'ime mgbanwe ahụ, ọtụtụ ndị ahụkwa na enweghị ndị isi ọchịchị siri ike n'aka ndị isi. Ọ gụsiri ha agụụ ike maka ogidi nkume nke orthodoxy na iwu ígwè nke nwere usoro ikike doro anya. Vatican II na-emesi anyị obi ike na The Church in the Modern World: "E nwere ọtụtụ ihe dị adị nke na-anaghị agbanwe agbanwe na nwere ntọala ha kachasị na Kraịst, onye bụ otu ụnyaahụ na taa, ee na mgbe niile" (Mba. 10, na-ehota ndị Hibru 13: 8).
Robert Bellarmine ji ndụ ya niile na-amụ Akwụkwọ Nsọ na ozizi Katọlik. Ihe odide ya na-enyere anyị aka ịghọta na ezigbo isi mmalite nke okwukwe anyị abụghị nanị usoro nke nkuzi, kama ọ bụ onye Jizọs nke ka bi na Chọọchị taa.
← Na post gara aga Gara aga post:Tugharia uche na nmehie gi ta
Ọzọ Post → Post ozo:Oziọma taa 17 Septemba 2020 na okwu Pope Francis